caafimaadka - ALinks
Cisbitaalada ugu wanaagsan ee Boqortooyada Midowday ee loogu talagalay Soo-booqdeyaasha iyo qurbaha.
June 17, 2020 Antika Kumari caafimaadka, UK
Adeegga Caafimaadka Qaranka ee Boqortooyada Midowday (NHS) waxaa loo aqoonsan yahay inuu ka mid yahay nidaamyada caafimaadka ee hoggaamiya adduunka. Dhammaan dadka aan heysan dhalashada Ingiriiska waxay xaq u leeyihiin daryeel caafimaad oo degdeg ah oo bilaash ah isbitaalada NHS UK. Laakiin, qaar adiga ayaa mas'uul ka noqon doona kharashyada qaarkood, oo ay go'aaminayaan
Adeegyada Caafimaadka ee ugu wanaagsan Denmark
Waxaa laga yaabaa 17, 2020 Antika Kumari Denmark, caafimaadka
Daryeelka caafimaadka ee Denmark waxaa inta badan bixiya dawladaha hoose iyo dhexe. Kalkaalinta, daryeelka guriga, iyo adeegyada caafimaadka ayaa mas'uul ka ah 98 degmo. Kharashaadka dowladda deenishka ee daryeelka caafimaadku waa qiyaastii 10.4 boqolkiiba GDP. Qodobkaan ayaa